Patios de Cordoba - परम्पराले विश्व सम्पदा साइट बनायो Absolut यात्रा
को कर्डोबाको आँगन तिनीहरू परम्परालाई एकताका साथ एकता गर्छन् जुन उच्च पर्यटकको चासोको उत्सवमा पुग्दछ। निस्सन्देह, एन्डलुसियन शहर हामीले यसलाई भेट्टाउन सक्ने महान वास्तुकलाको विरासतको लागि प्रसिद्ध छ। तर यो मात्र होईन, तर यो, सबै समयको सब भन्दा शानदार पार्टीहरू मध्ये एक हो।
कर्डोबाका पाटिओसलाई विश्व सम्पदाको रूपमा घोषणा गरिएको छ। त्यसो भए, आज हामी पत्ता लगाउँछन तिनीहरू के हुन्, आँगनका प्रकारहरू जुन हामी फेला पार्नेछौं साथै तिनीहरूको स्थान पनि। तपाईंले जान्नुपर्ने सबै कुरा, ताकि शहरमा तपाईंको अर्को भ्रमणमा, तपाईंले यो स्टपलाई आवश्यक भन्दा बढि याद गर्नुहुनेछ।
1 पाटिओस डे कर्डोबा के हो?
2 पाटिओसका प्रकारहरू
3 तपाईं यो पाटिओस कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ?
4 लस पाटिओस डे कोर्डोबा प्रतियोगिता
5 सजावट र बोटको प्रकार
पाटिओस डे कर्डोबा के हो?
हामी सबैलाई कर्डोबा जस्तो क्षेत्रको हावाइमलाई थाहा छ। उच्च तापक्रमको अर्थ यो हो कि रोमी समयमा नै उनीहरूले यस किसिमको सुख्खा मौसममा जीवनलाई अनुकूल बनाउनुपर्थ्यो। उनीहरूको समयमा एक महान विचारहरू प्रत्येक घरलाई आँगनको छेउमा राख्नु थियो। अवसरहरूको विशाल बहुमतमा, आँगनमा पनि एउटा झरना रहेको छ। यो कुवा पनि हराइरहेको अर्को विवरण हो जुन हराउन सकिदैन किनभने यसरी यसरी वर्षाको पानी स collect्कलन गर्दछ।
जब मुसलमानहरू आइपुगे, तिनीहरूले यस प्रकारको घरलाई नयाँ रूप दिए। पाटिओसका अतिरिक्त, तिनीहरू घरको तर्फबाट एक किसिमका प्यासेजवे वा कभर गरिएको क्षेत्रको रूपमा बनाए। अवश्य पनि उनीहरूले यसको सजावट परिणामलाई अधिक आकर्षक बनाउनका लागि बनाए। कुन तरिकामा? खैर, बोटबिरुवा संग। यस तरिकाले, यस्तो देखिन्छ कि यसले धेरै शीतल स्थानमा भएको महसुस गर्यो। यसरी, तथाकथित पाटिओस डे कर्डोबा सुरु भयो। कुनै श doubt्का बिना, तपाइँ अब आँगन नभएको घरको बारे सोच्न सक्नुहुनेछ।
प्रत्येक आँगनको मौलिकता हुन्छ कि एक विविध वास्तुकला प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो यसको विभिन्न विकासको कारण हो। हामी बाक्लो बोटको आँगनहरू फेला पार्न सक्छौं जुन बालकनी वा उच्च ग्यालरीहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। ती फ्लोरहरूको लागि जुन तिनीहरूलाई पूरा गर्दछ, तिनीहरू दुबै पक्का, संगमरमर वा ईंट समाप्त गर्न सकिन्छ। हामीले निम्नलिखित प्रकारका आँगनहरूका बारे कुरा गर्नुपर्नेछ:
स्टेटली पाटिओस: ती ती हुन् जसमा ती कुलीनहरू वा धार्मिक स्थानहरूको ती पुराना दरबारहरू समावेश छन्।
एकल परिवार गृह अदालत: यस अवस्थामा आँगन एकदम बन्द थियो। उही समानको फ्लोर फ्ल्यागस्टोनको हुने गर्थ्यो वा केही प्रकारको मोज़ेकको लागि। को छिमेकी घरहरूको आँगनतिनीहरू पनि देखिएका छन्, यद्यपि तिनीहरू प्रायः बारम्बार हुँदैनन्। दुई फ्लोरका साथै बालकनीहरू भएका क्षेत्रहरू भेट्दै।
प्रतिस्पर्धा आँगन: यसको नामले स indicates्केत गर्दछ, आज त्यहाँ कथित प्रतियोगिता पाटिओसहरू छन्। १ 1921 २१ पछि तिनीहरू एक प्रतियोगिताका लागि प्रस्तुत भएका छन्, ती तथ्यलाई धन्यवाद जुन उनीहरूले वास्तुकलाका बिभिन्न प्रकारहरू ओभरल्याप गर्छन्।
तपाईं यो पाटिओस कहाँ देख्न सक्नुहुन्छ?
यद्यपि त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरू छन् जहाँ तपाईं यस प्रकारका पर्यटक आकर्षणको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ, सबैभन्दा लोकप्रिय यो हो Alcázar Viejo क्षेत्र। यो र बीचमा सेन्ट बेसिलको पारीस, हामी हरेक चरणमा यो सुन्दरता भेट्नेछौं। यसको सडक बीचमा पत्ता लगाउन एक उत्तम क्षेत्र। अवश्य पनि, तपाई पेरियोस डे कोर्डोबा पनि बेरियो डे सान्ता मारिनामा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। क्षेत्र को नजिक कॉर्डोबा क्याथेड्रल मस्जिद तपाईं पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यसैले, वैसे पनि, तपाइँ आफैंलाई हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मारकहरू द्वारा टाढा जान दिनुहुनेछ। अर्कोतर्फ, हामीले यसको उल्लेख गर्नुपर्दछ भियाना प्यालेस जहाँ हामी कुल १२ आँगनहरू भेट्टाउनेछौं। त्यहाँ धेरै कुनाहरू छन् कर्डोबामा के हेर्ने!.
लस पाटिओस डे कोर्डोबा प्रतियोगिता
पाटिओस डे कर्डोबा प्रतियोगिता प्रायः मेको पहिलो पन्ध्रौंसम्म हुन्छ। १ 1921 २१ पछि तिनीहरू सार्वजनिक रूपमा र यसको पाठकहरूको बाट ठूलो स्वागतका साथ मनाइन्छन्। यस प्रतिस्पर्धामा, प्रत्येक घरका मालिकहरूले उनीहरूको आँगनमा ठूलो सुन्दरता दिन्छन्। लालचिएको पुरस्कार प्राप्त गर्नका लागि तिनीहरूले असंख्य भाँडा र सबै र flowers्गका फूलहरू सजाउँदछन्।
तर यो सबै होइन, किनकि थप रूपमा, एक संगीत समारोह पनि 40० भन्दा बढी प्रदर्शनको साथ आयोजित गरिएको छ। तिनीहरू विभिन्न सेटिंग्सका साथसाथै आँगनहरूमा पनि रमाइलो गर्न सकिन्छ। फ्लामेन्कोबाट शास्त्रीय संगीत तिनीहरू भोजका केही उत्तम दिनहरू पूरा गर्न उत्तम प्रस्ताव हुनेछन्। यो गत बर्ष, प्रतियोगिता करीव 45 pati आँगनको साथ बन्द भयो। बीस भन्दा बढी पुरानो वास्तुकलाको भाग थिए र बाँकी, केहि अधिक आधुनिक शैलीको साथ।
सजावट र बोटको प्रकार
यो भनिएको छ दुई बराबर आँगन पत्ता लगाउन यो धेरै गाह्रो छ। सायद यो किनभने विशाल बहुस majority्ख्यकसँग केहि चीज छ जसले उनीहरूलाई अद्वितीय बनाउँदछ भन्ने तथ्यको बावजूद ती सबैले एउटै सौन्दर्य बोक्दछन्। जब तपाईं तिनीहरूमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै विशेषता गन्ध छ कि चमेली छ। यो जस्तो स्थानको महान नायकहरू मध्ये एक। थप रूपमा, भित्ताहरूमा तपाईंले हनीसकल र यसको भाँडा देख्न सक्नुहुन्छ।
जे होस् कहिलेकाँही, मौलिकता भाँडोबाट क्यानसम्म जान्छ, तर समान उद्देश्यको साथ। तीनिहरुमा तपाईले पत्ता लगाउनु हुन्छ geraniums, carnations र पक्कै, गुलाब। तपाइँ उनीहरूलाई दिनमा भेट्न सक्नुहुन्छ, तर यो सिफारिस गरिन्छ यो दिउँसो अबेर सम्म। तसर्थ, तपाईं एक जादुई र आकर्षक दुनियामा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। मे महिना तिनीहरूलाई भेट्न उत्तम महिना हो, तर कुनै श doubt्का बिना, कुनै पनि समयमा तपाईं उही सुन्दरता पाउनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » Patios de Cordoba, परम्पराको सौन्दर्य